Umbono wami nge-USD tether ekuphenduleni okuthunyelwe ..
Lokhu kuyimpendulo yamaphoyinti ambalwa ku- Lesi sihloko vula I-Tether (USDT).
Umlando we-tether awumusha, kade uphenywa, nokho uyaqhubeka nokusebenza. Kuvunyelwe kanjani ukwenza njalo?
Kungashintshaniswa kanjani okusolakala ukuthi kulawulwa wamukele i-tether? Kuphakathi kokuthi konke ukushintshisana okukhulu akulawulwa noma ukukhishwa kwe-tether (okungenani okwakamuva) kufanele ngabe sekuvele kuhlolisisiwe.
Kuzungeze ama-5% kuphela asezimpahla ezinani lazo esilaziyo (ukheshi, ama-T-Bill).
... ihluke kanjani ibhalansi yesilinganiso sebhange? Ngabe yenziwa ngemali oyaziyo yeqiniso elizobaluleka i-X noma ngabe isakhiwa ama-appraisal, izibikezelo, izinkontileka ezizolungiswa ngokuzayo?
Kwaziwa ukuthi iTether iboshelwe ngokwengxenye kwimali engenayo ye-bitfinex (kanye ne- Ithokheni le-LEO)
Isikhonkwane sezinhlamvu zemali esizinzile sigcinwa ngokuhweba, njenganoma iyiphi imali "ezinzile" emhlabeni..njengoba kungenakukuvimba ukuthenga nokuthengisa imali nganoma iyiphi intengo oyithandayo ...
Uma uthenga i-X ngenhloso yokugcina inani, vele ufuna ukubamba kwakho kuzuze inani, hhayi ukukukhulula !, ngakho ukuphela kwento ongayenza ukutshela abanye ukuthi bathenge ukuvikela ukubamba kwakho. Kulokhu ayilandeli ukuthi i-X uhlelo lwe-ponzi. Lokhu kungamanga, lapho ufinyelela esiphethweni ngaphandle kwazo zonke izakhiwo ezidingekayo. Isitatimende esinengqondo esinembe kakhudlwana sohlelo lwe-ponzi sidinga ukuthi umnikazi azimisele ukulahla isabelo sakhe, lapho nje isabelo sakhe sikhuphuka ngenani..kodwa ngamalini? Futhi lapha sikulokho empeleni ukuthi ukuhweba kubukeka kanjani, uthenga i-X, ulinde ukuthi inqwabelene inani, bese uyathengisa. Eqinisweni ungasho ukuthi yonke imakethe yezezimali uhlelo lwe-ponzi, futhi kulula ukuthola abantu abavumelana nalesi sitatimende. I-Bitcoin ayihlukile kunezinye izinsimbi zezezimali.
Abavukuzi bathengisa imivuzo yabo nge-ASAP, ngabe lokhu kuyiqiniso? Ingaqinisekiswa kuketanga, ngokulandela lapho izinkokhelo zamachibi zihamba khona ngemuva kokuhlukaniswa. Ngicabanga ukuthi kunemisebenzi emincane / emaphakathi yezimayini enentshisekelo enkulu ekukhiqizeni i-cryptocurrency engaxoshiwe ku-fiat, futhi ayithengisi i-ASAP, futhi izicubungula yona njengezimayini njengendlela yokugcina inani. Imisebenzi emikhulu ethembele kubanikazi bamasheya abagcwele ibhekana nohlobo oluthile lwezivumelwano, engicabanga ukuthi zikhokhwa kusengaphambili ngezinye izindlela noma zixhaswe kancane. Kulokhu abavukuzi abakhulu bafuna ukukhokha imali yokuqasha. Basebenza kuma-timespans, njenge uma ngingowami nge-X hashrate izinyanga eziyi-X, ngizozuza i-X ngezindleko zamandla zika-Y . Imisebenzi emikhulu yezimayini ayiyona "imfucumfucu yezimakethe", ngakho-ke ukufuna ukuthi intengo ye-BTC kumele isekele abavukuzi bathengise ingcindezi kusho ukuthi kuzoba nokuhlangana okuqinile phakathi kwentengo ye-BTC ne-BTC hashrate ngehora, noma okungenani nsuku zonke. Ngabe kunjalo? I-AFAIK hasharate ibilokhu ihlehlise intengo, futhi ithonywe ezinye izinto.
UTether ulwela ukuthola abalingani ngoba kuyaphenywa, futhi akekho noyedwa ofuna inkathazo ngokuzithandela.
I-Tether ayisekelwa ngokugcwele, lokhu kuyafana kunoma yiliphi ibhange elinciphisa inani, umehluko ukuthi ukugeleza kwe-tether akunakwenzeka ukuthi kube kubi, okusho ukuthi imali engena ezimakethe ze-crypto, ayivamile ukuphuma kuyo, kanti ukuhamba kwemali kwamabhange kuncike emabhange (noma impilo yabo) uqobo. Izimo ze-runoff mancane kakhulu amathuba okuthi nge-tether.
UDeffi wayengekho ku-2017, ukuthuthukiswa nokushicilelwa kochungechunge lwezivumelwano ezihlakaniphile ezakha i-ecosystem kuthatha isikhathi, ikakhulukazi, ukushintshela kwizibambiso eziningi ze-DAI kwenzeka ngo-2019, i-whitepaper eyakhiwe yango-feb 2019.
Anginayo nencazelo yalokho engikushoyo, kodwa kungikhathaza ngempela njengokungaqondakali ukuthi inkululeko yokuthwebula ingakanani enenani lemali entsha engayikhipha, futhi konke ukushintshana okusobala ngokulawulwayo kufanele kukwamukele kahle, uma kunezimbobo eziyisisekelo ku-tether ukuphakela. Isikhala se-crypto sihlukahlukene impela, noma ngabe ukuwa kwe-tether (kungakanani ukuhluleka?) Kunezizwe ezinokugcinwa kwe-BTC. Futhi ukuzimisela ukushiya i-USD njengoba izinga lemali lomhlaba wonke kungokoqobo, iChina yayilungile nge-BTC isongela i-USD, hhayi kahle lapho iqala ukusongela i-CNY. Ngicabanga ukuthi kunamandla ahlukene adlalwayo esikhaleni se-crypto, phakathi kohulumeni, izimboni, amabhange, ukushintshana, amathonya nokuthengisa. Iphini likhomba i-tether njenge impande yabo bonke ububi ishiya umuzwa omubi.
Thumela Amathegi: i-crypto